အရက်​သမား ပို့စ်​ -၂ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အရက်​သမား ပို့စ်​ -၂
အရက်​သမား ပို့စ်​ -၂
မြန်​မာပြည်​မှာက ရှိရှိသမျှလူဦး​ရေရဲ့ ၄၀% ​ကျော်​က အရက်​​သောက်​သုံးကြသူ​တွေပါ ။ ​နေ့စဉ်​ရက်​ဆက်​ မပျက်​မကွက်​ ​သောက်​သုံးသူ​တွေကိုသာ အရက်​သမားလို့ သတ်​မှတ်​ပြီး ​နေ့စဉ်​ရက်​ဆက်​ မသောက်​နိုင်​တဲ့သူ​တွေက​တော့ အရက်​သမားစာရင်​းမဝင်​ပြန်​ပါဘူး ။ (ဥပမာ ​နေဝန်​းနီ တို့လို​ပေါ့ ။ အကြံအဖန်​​လေးရမှ ​ဘောလုံးပွဲ အကြံ​ပေး ၂လုံး အကြံ​ပေး​လေးလုပ်​ က​လေး​တွေကြားထဲ fb အ​ကောင်​့​လေးလုပ်​​ပေး ။ တစ်​ခါတစ်​​လေလည်​း အ​မေ့ဆီက နဲနဲပါးပါးဘတ်​တဲ့ ​ငွေ​ယား​လေးရှိ​နေမှ ဘီယာဆိုင်​​ပြေး ။ ) ​နေ့စဉ်​​သောက်​နိုင်​ဖို့​ဝေးစွ ။ တစ်​ပတ်​တစ်​ရက်​​တောင်​ ဘီယာနားမကပ်​နိုင်​ဘူး ။ ကံများဆိုးချင်​​တော့ ​နေဝန်​းနီ ​ပေးလိုက်​တဲ့ အသင်​းက ခွက်​ခွက်​လန်​​အောင်​ရှုံး​နေ​တော့ ​ဘောလုံးပွဲ​လောင်​းတဲ့သူ​တွေ ​နေဝန်​းနီ မြင်​ရင်​ထွက်​​ပြေး​နေပြီ ။ ၂လုံးသမား​တွေ​ကောပဲ ။ ​နေဝန်​းနီ​ပေးလိုက်​တဲ့ ဂဏန်​းက ငုတ်​ကွက်​​တွေချည်​့ကိုး ။ အရက်​​သောက်​ဖို့ အ​ကြောင်​း​လေးကဖန်​ချင်​​တော့ ဉာဏ်​သွားတဲ့ သူ​တွေကချဉ်​းကပ်​လာပြန်​​ရော ။ သူတို့က ​နေဝန်​းနီဆီက အသင်​းယူပြီး ဆန်​့ကျင်​ဘက်​​တွေ ​ဆော်​ကုန်​ပါ​ရောလား ။ နှစ်​ပတ်​​လောက်​အဆင်​​ပြေလိုက်​တယ်​ ပြီး​တော့ ပြန်​တည်​့သွား​ရော ။ ပြီး​တော့ မှန်​လိုက်​ မှားလိုက်​ မတည်​ငြိမ်​တာနဲ့ အရက်​ဆိုတာ ယက်​ရတာကွ ဆိုသလိုပါပဲ ။ အနံ့​လေးခံပြီး အာဆွတ်​ယုံ​လောက်​နဲ့ တင်​းတိမ်​​နေရတာကြာပါပ​ကောလား ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်​က​တော့ ရွာသူကြီးက ဇွဲဆု ​ပေးလိုက်​​တော့ ဘာရမလဲ ​ငွေထုတ်​ပြီးပြီးချင်​း ဘယ်​မှမသွားနိုင်​ဘူး ။ အရင်​က ကိုယ်​့အ​ပေါ် အနွံအနာခံ အရက်​တိုက်​ခဲ့တဲ့ သူငယ်​ချင်​းကို​ခေါ် ဘီယာဆိုင်​ကိုချီတက်​တာ​ပေါ့ ။ ​နောက်​ရွာထဲက သူငယ်​ချင်​း ဗစ်​တာစိုးမိုးကို​ဖုန်​းဆက်​ပြီးလှမ်​း​ခေါ် ။ သူက မပါလို့မရဘူး ။ ဒီဇာတ်​လမ်​းမှာ သူကဇာတ်​လိုက်​ ။ ရွာထဲမှာ တစ်​လုံးမှသာဝင်​မ​ရေးတာ ​နေဝန်​းနီကို​ရေးဖို့ အ​တော်​​မြှောက်​​ပေးတာကလား ။ တစ်​သိန်​းပြည်​့ဖို့ သူပဲတွန်​းအား​ပေးခဲ့တာ ။ ဖုန်​း​ဘေလ်​မရှိဘူး ဆိုရင်​​တောင်​သူက ဖြည်​့​ပေးတာ ။ ဆို​တော့ကာ ဇာတ်​လိုက်​ကြီး ဗစ်​တာကို ဖုန်​းဆက်​ပြီး မလာမချင်​း​ခေါ် ။ သူ​ရောက်​လာ​တော့ ​စော​စောက သူငယ်​ချင်​းက သူ့ဆိုင်​က လှမ်​း​ခေါ်လို့ ထွက်​သွားရပြန်​​ရော ။ ( ပထမ ​ခေါ်လာတဲ့သူငယ်​ချင်​းက ဟမ်​းဆက်​ဆိုင်​ဖွင်​့ထားတာ ။ အဲ့ဒါ​ကြောင်​့ သူ့ဆိုင်​နဲ့ နီးတဲ့ ဘီယာဆိုင်​မှာလာထိုင်​တာ ။ ဗစ်​တာစိုးမိုးက စာအုပ်​အငှားဆိုင်​ ။ မနက်​ပိုင်​း သူမထိုင်​လို့ရတယ်​ ။ သူ့သား ကိုထားပြီး ထွက်​လာတာ ) ။ ဘီယာဆိုင်​ထဲမှာ အ​ဖော်​သာ တစ်​​ယောက်​နဲ့ တစ်​​ယောက်​ ​အ​ပြောင်​းအလဲ လုပ်​သွားတယ်​ ။ ​နေဝန်​းနီ ကမလဲ​သေးဘူး ။ ဘယ်​လဲပါ့မလဲ နှစ်​ခွက်​ပဲ​သောက်​ရ​သေးတာကိုး ။
အရက်​ကို ​နေဝန်​းနီက ​သွေးထဲကကို ကြိုက်​ပါတယ်​ ။ ဒါ​ပေမဲ့ မ​သောက်​ရရင်​ မ​နေနိုင်​တဲ့ အဆင်​့ထိမ​ရောက်​​အောင်​ ထိမ်​းထားတယ်​ ။ ပြီး​တော့ အရက်​​သောက်​တာက မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ ဂုဏ်​ယူပြီး​ပြောစမှတ်​တွင်​စရာ ။ ဦး​လေး ၂​ယောက်​က အသက်​​လေးဆယ်​​ကျော်​မှာ အရက်​နဲ့ ​လျောဘရားသား လုပ်​သွားကြတယ်​ ။ ​လောကကြီးကို တာ့တာ ပြသွား​ပေမဲ့ ​နေဝန်​းနီ က ပန်​းပန်​​နေတုန်​း ။ အရက်​သမား ဖြစ်​ရတာ လွယ်​လွယ်​​လေး​တော့မှတ်​မ​နေနဲ့ ။ ပထမဆုံး ကိုယ်​့ပိုက်​ဆံနဲ့ကိုယ်​ အကုန်​ခံ လည်​း​သောက်​ရတယ်​ ။ မြင်​သူ​မေး​ငေါ့တာကိုလည်​းခံနိုင်​ရည်​ရှိရတယ်​ ။ ဒီလိုလူမျိုး​တွေများ​နေလို့လည်​း မြန်​မာပြည်​မှာရှိတဲ့ အရက်​ချက်​စက်​ရုံ​တွေ မ​ရောင်​းရလို့ ပိတ်​ပစ်​လိုက်​ရတယ်​မရှိပါဘူး ။ ​နော့ ……
ဒါဖြင်​့ လူ​တွေဘာ့​ကြောင်​့ ဒီမ​ကောင်​းဘူးလို့ ​ပြော​ပြော​နေကြတဲ့ အရက်​ကို တမ်​းတမ်​းစွဲ ​သောက်​​နေကြပါလိမ်​့ ။ ​မေးစရာ ​မေးခွန်​းတစ်​ခုဖြစ်​လာပါတယ်​ ။ ပြန်​​ဖြေမဲ့ အ​ဖြေကလည်​း လူမှုအသိုင်​းအဝိုင်​းကြားမှာ အငြင်​းပွားစရာဖြစ်​လာပါလိမ်​့မယ်​ ။ သင်​​ကော အရက်​ကို ကြိုက်​ပါတယ်​ ။ ​သောက်​ဖူးပါတယ်​လို့ ဆိုရင်​ ဘယ်​လိုအ​ဖြေမျိုး​ပေးဖို့ စိတ်​ကူးထားပါသလဲ ။
အရက်​သမားပိုစ်​့ (၁) က ဒီမှာပါ ။
အရက်သမားအဖိုးကြီး တစ်ယောက် က
အရက်စသောက်ဖို့ ကြိုးစား နေတဲ့ လူငယ်လေး ကို
“မသောက် ပါ နဲ့။ အန္တရာယ် ရှိတယ်” လို့ တားတယ်။
ဒါကို ကောင်လေး က
“ခင်ဗျားကျတော့သောက်ပြီး ကျုပ် ကိုကျ လာတားနေတယ်။” ဆိုပြီး ပြန်ပြောသတဲ့။
. ငြင်းကြစို့ အဘ ရာ။
အရက်​အ​ကြောင်​း ​ကောင်​း​ကြောင်​းဆိုပြစ်​ အကုန်​​ပြောပြမယ်​ ။ ​သောက်​ချင်​​​သောက်​ ။ မ​သောက်​ချင်​မ​သောက်​နဲ့ ။ သူ့​ရွေးချယ်​မှုကို မ​နှောက်​​ကြေး
”ဟုတ်ကဲ့” လို့ပဲ ပြန်ပြောပြီး နာခံလိုက်မှာ
သူ လုပ်တာ မှားပေမဲ့
သူ ပြောတာ မှန်တယ် ဆိုရင်. . .
အရက်​မ​ကောင်​း​ကြောင်​း ဝါ​တော်​​လေးဆယ်​ သိက္ခာ​တော်​ရ ငယ်​ဖြူဆရာ​တော်​ထက်​ ဝါရင်​့အရက်​သမားက အရက်​မ​ကောင်​း​ကြောင်​းပိုသိသလို​ပေါ့
အရက်တွေ ရှားတဲ့ ခေတ် တုန်းကတော့ တော တွေ မှာ ဖိနပ်စုတ် နဲ့ ချက် တဲ့ တော အရက်တွေ သောက်ခဲ့ ကြတယ်
ဒီ ခေတ် ကြတော့ လဖက်ရည် ဆိုင်ထက် ပိုပေါတဲ့ ဘီယာဆိုင် အရက်ဆိုင်တွေ မှာ အမျိုးအစားစုံး အရက်စုံ
အများစု က လူ ကို ဒုက္ခ ပေး နိုင်တာတွေ မကောင်းတဲ့ အရက်တွေ သောက် နေကြရတယ် ဘာမှ မထူး
အရက် ပဲ ကောင်းတာ ရှိသေးလား ဆိုရင်တော့
လုံးဝ မသောက်တာက အကောင်းဆုံးပေမဲ့
ပါဝင်ပစ္စည်းသန့်သန့် ကို စနစ်တကျ ချက်ထားတဲ့ အရက်ကောင်းကောင်းကို လူက အရက်ကို နိုင်ပြီး သောက်နိုင်ရင်တော့ မဆိုးလို့တော့ ပြောရမှာပဲ
ဒီ စကားတွေ က ဒီမှာ ပြောရတာ သိပ်မကောင်းဘူး
အရက်ဆိုင်မှာ ပြော ရမှ ကောင်းမှာ
လာလာချင်း အရက်သမား ပို့စ်ကို အရင် လာကြည့်တယ် …
ပြီးခဲ့တဲ့ ထဲမှာ မကောင်းဘူးလို့ ပြောကြပေမယ့် …
ကောင်းကွက် ရှိလို့ စွဲတာပေါ့ … အဲ့ဒီ ကောင်းကွက် က ဘာလဲ?
ဆိုတာ သိချင်လို့ လာကြည့်တာ …
ဟိုအပေါ်က လစ်ဘရယ် ယောက်ကျားကြီး ပြောပုံ အရ ဆိုရင်ဒေါ့ …
အရက်မှာ စိတ်ကို ရွှင်မြူး တက်ကြွ စေတဲ့ ကောင်းကွက် ရှိလို့ စွဲတာပေါ့ … နော့ …
.ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ လုံးဝမသောက်တဲ့ ယောက်ျားတွေကို တွေ့ဖူးတယ်။ သူတို့အကုန် သူတို့စိတ် သူတို့ မနိုင်ဘူး။ မနိုင်လို့ကို မသောက်ကြတာ။ ပြီးတော့ ယောက်ျားတွေ အဲဒါတွေ မသုံးစွဲလို့ စိတ်ကကောင်းတယ်လို့ မထင်နဲ့။ အဲဒါတွေ အားလုံးရှင်းတဲ့ ယောက်ျား သာတောင် ဆိုးသေးတယ်။ ဘီယာ တို့ ဘာတို့ ခေတ်နဲ့အညီ တန်သင့်သလောက် သောက်တာ မဆိုးပါဘူး။
ဘာပဲလုပ်လုပ် ကွကိုယ် ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အရက်သမားနှင့် ဖဲသမားပဲ ပေါတယ်…. ကြည့်ပါလား ဘယ်နေရာမဆို ဘီယာဆိုင်တွေပဲ ပေါနေတာလေ…
ဘီယာကော အရက်ကောကြိုက်တယ်နော်။ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက်သာ သောက်ဖြစ်တယ်နော်။ သောက်ရင်လည်း ထိန်းသောက်တယ်နော်။ ဒါပေသိ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ပတ်တစ်ခါတောင် မသောက်ဘူးနော်။